Famakiana ny Semalta - Tranok'ala Internet ho an'ny Fandrakofam-pahalalana momba ny Internet
The web scrap ing tools automate the web data extraction procedure dia azo ampidinina amin'ny navigateur rehetra. Tsy maintsy manondro ny sora-piraiketana tianao hamboarina ianao, ary ireo fitaovana ireo dia hanao ny sisa ho anao. Natao ho an'ny orinasa sy ny manam-pahaizana izy ireo ary tsy mila fahaizana ara-teknika. Ny sasany amin'ireo fitaovana ireo dia mifanaraka amin'ny Windows raha ny hafa dia tsara ho an'ny mpampiasa Linux.
1. 80 leg
80legs dia tranokala malaza amin'ny tranonkala sy fanodinana daty. Izany dia mamela anao mamorona sy manatsara ny fitifirana tranonkala mba hahazoana vokatra tadiavina. Ny 80legs dia naorina teo ambonin'ilay tambajotram-pifandraisan-tseranana sy fanodinkodinam-peo avy amin'ny tranonkala samihafa tao anatin'ny minitra vitsy.
Import. Izany dia fitaovana mahomby sy azo itokisana . Azo ampiasaina amin'ny orinasa tsy miankina amin'ny marika afrikana ary mety hampandroso ny fikarohana akademika. Tena tsara ho an'ireo mpanao gazety ary manampy azy ireo hanangona vaovao avy amin'ny tranonkala samihafa. Ity fitaovana maoderina ity dia mamela ny vokatra SaaS, ahafahanao manova ny angon-drakitra amin'ny endrika ilaina.
Mifandray amin'ny teknolojia fianarana maoderina, Dexi. Ity dia mahagaga ary iray amin'ireo rindrambaiko malaza indrindra amin'ny aterineto. Izy io dia novolavolan'i Henrik, mpandrindra ny ordinatera, ary manamboatra ny fomba fametrahana ny angon-drakitra izay manome anao ny vokatra tsara indrindra. Ny Dexi's Intelligent Automation Platform dia natokisan'ny orinasa maherin'ny 20 arivo, toy ny Samsung, Microsoft, Amazon, ary PwC.
Webhouse. io dia manampy ireo orinasa hanangona, hanakanana sy handamina ny angona amin'ny fomba mahomby sy mahomby. Toby rahateo izy io ary mora ampiasaina ary manome vokatra azo tsapain-tanana avy hatrany. Webhouse. io dia fomba hafa mahasoa an'i Mozenda ary azo ampiasaina amin'ny sehatry ny orinasa. Ampiasao ity fitaovana ity, azonao atao ny mamoaka ny valiny amin'ny format TSV, JSON, CSV ary XML.
Ny scrapinghub dia iray amin'ireo fandaharam-pianarana maoderina indrindra ampiasaina. Izany dia mamela antsika hikapoka na mamoaka pejy web tsy misy fahalalana fahalalana. Ankoatra izany, ny Scrapinghub dia manome antsika hery entin'ny tranokala avy amin'ny adiresy IP na toerana maro.
Visual Scraper dia tsara ho an'ny famoahana angona avy amin'ny sary sy PDF. Mafy kokoa ho an'ireo orinasa sy mpandrindra ny fanangonana vaovao avy amin'ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy, fa ny Visual Scraper dia afaka manangona angona avy amin'ny Facebook sy Twitter koa. Ny mpandefa azy ety anaty aterineto dia mahatonga anao mora hampifandanja ny tranonkalanao ary manatsara ny fahombiazan'ny tranonkalanao.
Ny Outwit Hub dia tranonkala fandefasana tranonkala fohy. Natao hisorohana ny vaovao avy amin'ny loharano ao an-toerana sy an-tserasera izany ary manaiky URL, sary, tranonkala sy andian-teny, mahatonga ny asa mora sy mora kokoa. Izy io dia afaka manome ny vokatra na amin'ny format tsy ara-organisa sy voalamina ary manondrana ny angon-drakitrao any amin'ny takelaka Source .